Waa maxay positivism galmo | Bezzia
Waa maxay positivism galmo
Maria Jose Roldan | 14/09/2021 23:03 | Galmo
In kasta oo ay u ekaan karto been, Maanta weli waxaa jira waddo dheer oo loo maro aagga muranka badan sida galmada. Illaa dhowr sano ka hor, xiriirrada heterosexual iyo monogamous ayaa badiyay dadka qaarkoodna galmadu waxay lahayd hal dhammaad ama ujeedo, taas oo aan ahayn mid kale oo aan ahayn taranka aadanaha. Nasiib wanaag arrimuhu xoogaa way horumareen oo durba waa caadi in la arko lammaaneyaasha qaniisiinta ah ama lamaaneyaal ku raaxeysta galmada.
Dareen -celinta galmada ayaa si isa soo taraysa ugu dhisan bulshada dhexdeeda iyo waxaa wanaagsan inaad yeelato maskax furan marka laga hadlayo dunida galmada. Maqaalka soo socda waxaan kugula hadli doonnaa si faahfaahsan oo ku saabsan suuragalnimada galmada ee aan soo sheegnay iyo sida ugu wanaagsan ee loo dhaqan gelin karo.
1 Waa maxay positivism galmo?
2 Sida loo adeegsado ku -dhaqanka galmo -galinta
Waa maxay positivism galmo?
Waa imminka oo aad u badan kuwa raacsan oo u tixgeliya galmadu inay tahay wax ku jira aadanaha oo ay tahay in si buuxda loogu raaxeysto. Suugaanta galmada waxay ku talisaa in dulqaad la yeesho marka laga hadlayo galmada iyo inaan la isku xadidin iyada oo ay jirto xeerarka laga yaabo in qayb bulshada ka mid ahi soo rogto. Waa inaad si buuxda ugu raaxaysataa galmada oo aad ka tagtaa caqiidooyinka beenta ah ee aan waxba soo kordhinayn
Marka la eego ujeeddooyinka uu hadda doonayo, waxyaabaha soo socda waa in la muujiyaa:
Xorriyadda iyo ixtiraamka ee la xiriirta wax kasta oo la xiriira galmada.
Waa inaad dulqaad leedahay dhinaca wax kasta oo galmo ah hana ku dhaliilin lacag la’aan.
Waa inaan hubinnaa in waxbarashada la xiriirta galmada ay tahay mid run ah oo dhammaystiran intii suurtagal ah, xor ka ah nooc kasta oo xaaraan ah ama caadooyin ah.
Sida loo adeegsado ku -dhaqanka galmo -galinta
Markay timaaddo ku -dhaqmidda xilligan, lahaanshaha dabeecad wanaagsan xagga galmada waa lama huraan. Waa inaad naftaada ka bilowdaa oo aad tirtirtaa dhammaan cuqdadaha aad ka qabi karto galmada. Laga soo bilaabo halkan, waxaa wanaagsan in ficil -gelintan lagu dhaqmo cilaaqaadyada shaqsiyeed.
Haysashada habdhaqankan wax kasta oo ku xeeran galmada, Ma aha hawl fudud waxayna u baahan tahay xoogaa waqti ah si loo fuliyo. Haddii aad beddesho habdhaqankaaga oo aad bilowdo inaad ka aragto jinsi dhinac kale, isbeddelku wuxuu ku imaan doonaa dhinac walba oo raaxada heerka galmada ayaa aad u weynaan doonta.
Gaaban, waxaa muhiim ah inaad ka tagto xaaraan iyo ceebta galmada oo bilaw inaad yeelato maskax furan markay timaaddo. Haysashada qaarkood ee ku saabsan galmada iyo caqiidooyinka beenta ah ee ku saabsan waxay saamayn xun ku yeelan kartaa cilaaqaadka.
Haddii dhinaca kale uu qofku leeyahay maskax furan marka ay timaaddo galmada, waxay noqon doontaa mid aad u faa'iido badan marka laga hadlayo xiriirka dadka kale. Waxaa muhiim ah in qayb ka mid ah bulshada maanta ay bilawdo inay kor u qaaddo suugaanta galmada iyo baro inaad ixtiraamto oo aad u dulqaadato wax walba oo ku wareegsan dunida galmada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Cilmu-nafsiga iyo lamaanaha » Galmo » Waa maxay positivism galmo
Talooyin ku saabsan ka -badbaada isgaarsiinta
Cuntooyinka waaweyn ee ay tahay inaad ku darto cuntadaada